Kutheni ukhetha thina | I-BAODING YINGTESHENG BRISTLE KUNYE NE-BrUSH MAK CO., LTD
YTS iye yaxhotyiswa ngaphezulu kwe-100 iiseti semi-oluzenzekelayo kunye oluzenzekelayo ibrashi kunye novavanyo izixhobo, nto leyo ukuphucula ubuchule YTS imveliso kakhulu. Kwangelo xesha, i-YTS iphuhlise ngokuzimeleyo oomatshini bokwenza i-ferrule kunye nezinye iinkqubo ngokungqinelana neempawu zayo zemveliso. Izixhobo ezinikezelweyo zokuvelisa ngokuzenzekelayo zahlukile kwabanye abakwishishini. Ukongeza, sinokuba nolawulo ngakumbi kwixesha lethu lokuhanjiswa kweemveliso (i-ETD kunye ne-ETA). Ngoku i-YTS inemveliso yeebrashi ezizizigidi ezingama-50, izigidi ezingama-30 zeeroli kunye neetoni ezingama-3000 zezinto ezinamabhanti.
UMASIFUNDISANE WETHU WOKWENZA
I-YTS inabasebenzi abangaphezulu kwe-150 abenza iworkshop kwaye sonke siye saqonda ukusebenza kwemigca yokuzihambisa ngokuzenzekelayo. Uyilo lweendawo zokusebenzela zilungelelaniswe kwaye zinengqiqo. Izixhobo zemveliso zilula kwaye zikrelekrele, ezilula ukuba abasebenzi basebenze. Bonke abasebenzi abakwi-Intanethi baqeqeshwe ngobuchule kwaye balandela ngokungqongqo inkqubo kunye nemigangatho esemgangathweni. Inkqubo yolawulo lomgangatho we-YTS yiyo yonke inkqubo ukusuka kwimpahla yegusha ukugqiba imveliso. Siphumeza ukuhlolwa kweesampulu ezingama-20% kunye nokuhlolwa ngokupheleleyo kwe-100% emva kokuba zonke iimveliso zigqityiwe.
Ilabhoratri yethu isetyenziselwa ukuvavanya iibrashi zethu kunye nokufumana iindlela zokuphucula. Senza iimvavanyo ezininzi ezibanzi ngaphambi kokuba sithengise iibrashi zethu kwintengiso, iimveliso zethu ezintsha ziyaphuhliswa nakwilebhu.